Xayeysiinta ayaa hageysa Xayeysiinta Raadinta Mobilka
Tilmaamaha Xayeysiiyaha ee Mobilka
Isniin, Disembar 31, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkii hore waxaan waqti la qaatay waalidkay oo aad baan uga naxay markii ay i tuseen labadooduba waxay kaga ganacsanayeen taleefannadooda gacanta IPhones. In kasta oo ay labaduba si aad ah uga careysnaayeen barashada sida loo isticmaalo, waxay ii sheegeen in runti ay ka qiimo jaban tahay iPhone 4 marka loo eego taleefoonka gacanta ee caadiga ah. Dabcan, qaadashada gudaha ee taasi waa in adeeg bixiyehooda moobiilku rajeynayo inuu dakhli dheeri ah ka soo saaro taleefanka casriga ah intii ay ku heli lahaayeen qaab ka jaban. Si kastaba ha noqotee, Hooyaday waxay horeyba u qaadaneysay barnaamijyada wax iibsiga maxalliga ah iyo raadinta maxalliga ah.
Waa waqti uun ka hor inta taleefanka gacanta ee caadiga ahi duugoobay oo aan mar dambe loo qaybin. Tani waxay siin doontaa dadweynahu helitaanka raadinta maxalliga ah iyo codsiyada dukaamaysiga - sii kordhinta mugga iyo caannimada xayeysiinta raadinta moobiilka. Tirooyinku waa kuwo naxdin leh oo fursadda durba waa la joogaa iyada oo suuqleyda xiisaha lihi ay ka faa'iideysan karaan. StartApp waxay lashaqeeyaan kuwa soosaara barnaamijyada si ay uga caawiyaan inay lacag badan ka helaan barnaamijyadooda bilaashka ah iyagoo adeegsanaya dakhli raadinta waxayna isku keeneen boggan faafaahinta ah xayeysiiyaasha mobilka ugu sareeya:
Tags: xayaysiinta moobiilkaxayeesiinta mobileraadinta moobiilka
Douglas Karr Monday, December 31, 2012 Sunday, October 4, 2015
Warbaahinta Bulshada: Adduunyo Fursado Ganacsi Yar
Qalbigaaga geli Xiriirradaada